Goob wanaagsan oo IMS ah ayaa la sameeyay Manifold - Geofumadas
Luulyo, 2008 Geospatial - GIS, GIS kala cayncayn ah
Maalmo yar ka hor sharaxay sida abuuraan adeeg khariidad ah oo adeegsanaya Manifold GIS oo abuuraya ASP site iyada oo la adeegsanayo template ah oo ku yimaada default iyo serverka maxaliga ah ... ee daqiiqadaha 23.
Boggan shabakada magaalada Niagara Falls (Niagara Falls) in California Ontario waa tusaale wanaagsan oo ah waxa la samayn karo wax yar oo hal-abuur leh iyo caqdi-xumo.
Waa wax hal-abuur ah, waxay ku darsadeen waxyaabo horayba ugu jirey template sida zoom, dig, cabbir, macluumaad, cusbooneysiin ... Waxa ay sameeyeen waxay isticmaaleen AJAX si ay u abuuraan astaanta hoosta iyo calaamadaha muuqaal badan laakiin adeegsiga dadweynaha.
Inta soo hartay waa hal-abuur halbeeg ah iyo dhadhanka loo adeegsan karo qaabka css.
Ka hor inta aanan daabicin sheyga oo ku yimaada astaamaha, taas oo muujineysa lakabyada laga heli karo khariidada la dhoofiyay. Si aad uhesho khariidado kala duwan, waxay abuureen liisto u yeeraya khariidadahan waxayna sidan ku muujinayaan lakabyada halkaa ku yaal. Mowjad xun oo ah in arrintani ay lumiso xadka marxaladdii hore.
Darfahoodii xaq u jiidi karaan iyo dhibic, Ajax faa'iido, inta kale waa template fudud (search, layers, dulmar map iyo halyeeyadoodii hore) la geeyo fursadaha taagan. Waxa xiiso leh, marka muujiyay daaha, layers waxaa lagu soo bandhigay ixtiraam xaallad in map in (map waa masaal of MXD ArcMap ah), oo halkaas ayuu ku helay in ay ku qasbi badhan si ay u raaxayn lahaa.
Inta soo hartay, woqooyiga waqooyiga, miisaanka garaafka iyo barxad xeeladaysan oo xitaa inkasta oo si xun loo meeleeyay si fiican u shaqeynayaan.
Noocyada qaar ayaa noo diidaya shaki haddii ay yihiin codsiyo sawirro kala duwan ama lakabyo, sida lafaha oo lagu arki karo madow iyo caddaan ama midabyo. Iyada oo wax laga soo qaado Sawirada waa inay suurtogal tahay inay ku sameeyaan lakabka isku midka ah, sida calaamadda buluuga ah marka la muujinayo macluumaadka daaqada popup. Waxaad sidoo kale haysataa ikhtiyaarka ah inaad ku sawirto khariidada, qaar ka mid ah WFS-T waxaad abuuri kartaa adeegyada dayactirka macaamilka.
Kharashka? Runtime Manifold, $ 100 on server ah IIS iyo css dhadhan wanaagsan.
Goobta si joogto ah ayaa loo cusbooneysiiyaa, xitaa hadda waxay ku dhajiyeen qalabka korontada, iyagoo ka tagaya ikhtiyaarada halyeeyada iyo ikhtiyaarka si loo dhejiyo amarka, muuqaalka iyo dulqaadka lakabka.
Post Previous«Previous Microsoft wuxuu ku dhawaaqay TrueSpace
Post Next Bentley iyo tiknoolajiyada "soo baxaya" ee sawirrada radarNext »
Hal Jawaab u Jawaab "IST site wanaagsan oo la abuuray Manifold"
Shawn isagu wuxuu leeyahay:
Waad ku mahadsan tahay dib u eegista lagu sameeyay boggeena. Sax yar oo ku saabsan Niagara Falls in kastoo… waxaan ku suganahay gobolka Ontario, Kanada.